ShweMinThar: Tech Gadget's In-Depth Review : OnePlus 5T
Well, this is hard. Really hard. တစ်ခါတလေကြုံဖူးကြမှာပါ - တစ်ခုခုကို မျှော်လင့်ခဲ့ပြီး မျှော်လင့်တဲ့အတိုင်းမဖြစ်လာတာ... ဒါမှမဟုတ် ဒါကမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ သိနေပေမယ့်၊ မကြာခင်ကောင်းသွားမှာဆိုပြီး တွယ်ငြိနေပြီး ပြီးပြတ်အောင်မလုပ်နိုင်တာမျိုး။ အခုကျွန်တော်တို့ ပြောသွားမယ့် OnePlus 5T ဖုန်းက In-Depth Review တောင် မလုပ်ပဲ ကျော်လိုက်ဖို့အထိစဉ်းစားမိခဲ့တဲ့အထိ Emotional Changes အများကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးပါ။ ဒီအတိုင်းပဲ ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့ တန်တယ် - ဝယ်သင့်တယ်ဆိုတာပဲ တိုတိုပြတ်ပြတ်ပြောပြီး ရပ်လိုက်ဖို့ စိတ်ကူးပေမယ့်... ဒါပေမယ့် ဆိုတာတွေကို ထည့်စဉ်းစားကြည့်ရင် တော်တော်လေးကို အတောမသတ်နိုင်အောင်များပါတယ်။
Maybe, ဒီတစ်ခါ Intro က တော်တော်လေးကို နားမလည်စရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်၊ အခုဆက်ပြီး ဖတ်ရမယ့် Article က အခုထက်ပိုပြီး နားလည်ဖို့ခက်ကောင်းခက်ပါလိမ့်မယ်။ အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားခဲ့ပြီး ဘာတစ်ခုမှမကျန်ရအောင် အချိန်တော်ေ်တ်ာလေးကို ယူပြီး Daily Driver အနေနဲ့ သုံးပြီးမှ ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက် User Experience ပေါ်ပဲ 100% မှီခိုပါလိမ့်မယ်။
Please take time. It's our longest article, yet.
ပထမဆုံး In-Depth Review တွေမှာပြောနေကြဖြစ်တဲ့ Design နဲ့ စပါမယ်။ OnePlus 5T က "T" Model တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် ပြီးခဲ့တဲ့ OnePlus5နဲ့ နောက်ကျောဘက်ပုံစံ၊ Body Design တူတူပါပဲ။ But Hand Feeling?
လက်ကကိုင်ပြီးအသုံးပြုကြည့်အချိန်မှာ OnePlus 5T က ထူးထူးခြားခြားကိုင်ရခက်နေတာ၊ OnePlus5ထက်ပိုလေးတယ်ဆိုပေမယ့် လက်ထဲရောက်တဲ့အချိန်မှာ ခွဲရတာတော်တေ်ာလေးကို ခက်ပါတယ်။ OnePlus5နဲ့ တူညီတယ်ဆိုပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ အမြင်မှာ အဓိကပြောင်းလဲသွားတဲ့နေရာ ၂ နေရာရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ Camera Hump နဲ့ Buttons တွေပါ။
အရင်ဆုံး ကင်မရာကဖုထွက်နေတဲ့ဘု - Carl Pei ကိုယ်တိုင် ဖုန်းအရှေ့ဘက်မှာ Display အတွက်နေရာပေးလိုက်ရတဲ့အတွက် Camera Hump ကို OnePlus5ထက်ပိုပြီး အပြင်ထုတ်လိုက်ရတယ်ဆိုတာပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် OnePlus က 5T Camera Hump Design ကို နည်းနည်းပြေပြေလေးဖြစ်သွားအောင်ပြောင်းခဲ့တယ် - သိပ်တော့မသိသာတော့ဘူးပေါ့။ Camera Lens ကို ကာထားတဲ့ Glass ကတော့ Sapphire ဖြစ်ပုံပါပဲ - စားပွဲပေါ်ပွတ်ဆွဲကြည့်ပေမယ့်လည်း အစင်းထင်တာမတွေ့ရပါဘူး။
နောက်တစ်ခုက Buttons တွေပါ - OnePlus5နဲ့ ထားထားတဲ့ပုံစံတူတူပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကွာသွားတာက နှိပ်ရတဲ့ Feeling ပါ။ OnePlus 5T မှာ သိသိသာသာကို Clicky Feeling လျော့သွားပြီး နှိပ်ရတာပိုပြီး လက်ကို Stress မဖြစ်ပဲနဲ့အဆင်ပြေလာပါတယ် - အထူးသဖြင့် Alert Slider ပါ။
သဘောကျမိတာက Fingerprint နေရာက လုံးဝကိုမှားနိုင်ဖွယ်ရာမရှိတဲ့ အလယ်တည့်တည့်မှာရှိနေတယ် - ဒါက ကောင်းတဲ့အချက်ပေမယ့် Xiaomi Entry ဖုန်းတွေမှာ ရှိတဲ့နေရာအတိုင်းပါပဲ :3
မကြိုက်တာကို ပြောပါဆိုရင် အခုအချိန်အထိ Speaker Design မပြောင်းတဲ့အတွက် Landscape နဲ့ ဂိမ်းဆော့ရင်၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင် လက်က Speaker ကို ပိတ်မိတာတွေဖြစ်နေသေးတယ်။ နောက်ထပ်တစ်ခုမကောင်းတာပြောပါဆိုရင် အဲ့ဒါက Original ပါတဲ့ Screenguard ဖြစ်မှာပါ။
Don't take us wrong. OnePlus ဖုန်းတွေမှာ တော်ရုံ မှန်ကပ်ထပ်ဝယ်စရာမလိုပဲ ပါပြီးသားဖြစ်နေတာကို ကျွန်တော်တို့ ကြိုက်ပါတယ်။ OnePlus5တုန်းကလည်း Original Screenguard ကို မခွာပဲသုံးခဲ့ပေမယ့် အခု OnePlus 5T မှာတော့ ပါလာတဲ့ Original Screenguard က ပုံမှန်ထက် Quality ညံ့သွားတယ်လို့ ခံစားရပါတယ်။ သုံးနေတုန်း ၂ ပတ်ဝန်းကျင်လောက်မှာ ရှိသင့်တာထက်ပိုတယ်လို့ ထင်မိတဲ့အစင်းတွေထင်နေတယ် - နောက်တစ်ခုက Screenguard ပတ်လည်မှာဖုန်တွေကပ်နေတာကြောင့် နောက်ဆုံး သည်းမခံနိုင်တော့ပဲ ဆွဲခွာပြီး ဘာမှမကပ်ပဲသုံးနေမိတဲ့အထိပါ။
အဲ့ဒီမှာ ထူးဆန်းတာတစ်ခုက အခု ကျွန်တေ်ာတို့ ဖုန်းကို ဂရုမစိုက်ပဲ မှန်ကပ်မကပ်ပဲ သုံးလာတာ ၅ ရက်လောက်ရှိနေပါပြီ။ ဒါပေမယ့် အခုအချိန်အထိတော့ အစင်းရာ သေးသေးလေးတစ်ခုတောင်မထင်သေးပါဘူး - Maybe too Early, but the others except iPhone X have tiny scratches.
အဲ့တော့ OnePlus 5T ဖုန်းဟာ OnePlus5နဲ့ အပြင်ပန်းတူတယ် - အဲ့ဒီအတွက် အခုနောက်ပိုင်းရှားပါးလာတဲ့ Premium Metal Body ဖုန်းတွေထဲမှာ တော်တေ်ာလေးကို Build Quality ကောင်းတဲ့ဖုန်းဆိုတာက ပြောဖို့မလိုပါဘူး။ ကိုင်လိုက်တာနဲ့ ဒါက Premium ဒေါ်လာ ၁ထောင်တန်ဖုန်း Feeling မရပေမယ့် သေသေချာချာကို ပြုလုပ်ထားမှန်း သိနိုင်တဲ့ဖုန်းတစ်ခုပါ။
Not iPhone7Plus Clone but Oppo F5 Premium Version this time. :P
Tech Gadget's Rating : 4.5 Out of5Stars (Solid and Great Build Quality)
OnePlus 5T ကင်မရာအကြောင်းကို ရှင်းပြပြီတဲ့ Article တွေအများကြီးပါ - စိတ်ဝင်စားလို့ အခြား Page တွေ၊ YouTube Review တွေကြည့်ပြီးတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်း သိပြီးလောက်ပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့အတွက် ကင်မရာပိုင်းက အမှန်အတိုင်းပြောရရင် Upgrade လား၊ Downgrade လား ဒါမှမဟုတ် ဒီအတိုင်း ပြောင်းလဲမှုလားဆိုတာကို ယတိပြတ်ပြောဖို့ ခက်နေတုန်းပါ - အဲ့တော့ ပြောတတ်သလိုပဲပြောသွားပါမယ်။
OnePlus 5T ရဲ့ Main 16 Megapixels Sensor က အရင်တုန်းက OnePlus5မှာပါတာနဲ့ တူတူပါပဲ - နောက်ပြီး Software Control ပိုင်းလည်း အကုန်တူတူပါပဲ။ အစက OnePlus5နဲ့ 5T ကို Daytime Comparison Shots တင်ဖို့ စိတ်ကူးခဲ့ပေမယ့် ထွက်လာတဲ့ပုံ၊ Setting အကုန်တူတူဖြစ်နေတော့ တင်လည်း အကျိုးမရှိဘူးလို့ ယူဆပြီး မတင်ဖြစ်တော့တာပါ။
OnePlus5Review မှာ ကျွန်တော်တို့ Camera ကို သဘောကျခဲ့ပါတယ် - ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Color Accuracy ကောင်းတယ်၊ Focus မြန်တယ်၊ HDR နဲ့ Dynamic Range က သာမန်လို့ ပြောလို့ရတယ်။ ၂၀၁၇ နှစ်လယ်အရှေ့ပိုင်းလောက်မှာတော့ OnePlus5ဟာ အရမ်း Premium မဖြစ်လွန်း၊ Mid Range မကျလွန်းတဲ့ ကင်မရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာပါ။
ဒါပေမယ့် အခု OnePlus 5T ရဲ့ Primary Sensor က OnePlus5နဲ့ တူတူပဲဆိုတာက OnePlus5တုန်းက ကျွန်တော်တို့ ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း ပြန်ပြောဖို့မလွယ်စေတဲ့အချက်ပါ။ ဘာလို့လဲ?
OnePlus5ထွက်တုန်းက Xiaomi Mi 6, Samsung Galaxy S8, Huawei P10, Sony XZs တို့ပဲရှိသေးတာပါ - အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက Daytime Auto Mode ယှဉ်ရိုက်ရင် OnePlus5နဲ့ S8 ကလွဲပြီး ကျန်တာတွေက အရမ်းကြီးမကွာဘူးလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ အသစ်ပါလာတဲ့ 18:9 Mode ကလည်း ဖုန်း Display အပြည့်ပြန်ကြည့်ချင်တာကလွဲရင် အဆင်မပြေသေးပဲ 16:9 Option ပြန်ထည့်ပေးသင့်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အခု OnePlus 5T ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာ အခြား Flagship ဖုန်းတွေက ကင်မရာပိုင်းအရမ်းကောင်းလာပြီးတော့ 5T ရဲ့ ကင်မရာက ၆ လလောက် နောက်ကျကျန်နေခဲ့တယ်ပဲပြောရမှာပါ။ Samsung Note 8, iPhone X လိုဖုန်းတွေနဲ့က သိသိသာသာမကွာခြားသေးဘူးဆိုပေမယ့် Google Pixel 2, Huawei Mate 10 Pro လို ဖုန်းတွေနဲ့ ယှဉ်တဲ့အချိန်မှာ OnePlus 5T ရဲ့ ကင်မရာက တော်တော်လေး အလှမ်းဝေးသွားပြီလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
အဲ့တော့ကာ OnePlus 5T ရဲ့ Primary Sensor ကိုသုံးသပ်ရရင် မကောင်းတာမဟုတ်ပဲ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အကောင်းဆုံးဆိုတာတွေနဲ့ ယှဉ်လို့မရတော့လောက်အောင် နောက်ကောက်ကျနေခဲ့ပါပြီ။
Wait, OnePlus 5T ရဲ့ ကင်မရာက ၂ လုံးပါ - နောက် Secondary Lens ကလည်း Telephoto Lens တွေ၊ Wide Lens တွေမဟုတ်ပဲ သာမန် f1.7 20 Megapixels Lens တစ်ခုပါ။ အဲ့ဒီ Lens ကတကယ်ဘယ်နေရာတွေမှာသုံးတာလဲ?
OnePlus5မှာ အားမရခဲ့တဲ့အချက်က Portrait ရိုက်ရင် အခန်းတွင်းနည်းနည်းအလင်းရောင်အားနည်းတဲ့အချိန်တွေမှာ အဆင်မပြေတာနဲ့ Low Light က f1.7 Lens တစ်ခုလိုမျိုး မကောင်းတာပါ။
အဲ့ဒီအတွက် OnePlus ကနေ 5T ကို 20MP Secondary Lens ဆိုပြီး Pixel ၄ ခုကို တစ်ခုထဲပေါင်းပေးတဲ့နည်းပညာတစ်ခု ပြောင်းသုံးလိုက်ပါတယ်။ OnePlus က ကြေငြာထားသလို Low Light Lens က အလကားပါ - No Light Lens ဆိုမှ မှန်မှာပါ။ 10 Lux အောက်ဆိုတာက လူအယောက် ၁၀၀ မှာ ၉၀ လောက်က DSLR ကြီးရှိနေရင်တောင် ဓါတ်ပုံရိုက်လို့မရလောက်အောင် မှောင်နေတယ်ဆိုပြီး မပြောပဲနားလည်တဲ့နေရာတွေပါ (Night Photography ဆိုရင်တော့ တစ်မျိုးပေါ့)
OnePlus 5T ရဲ့ Low Light Lens ကို အချိန်တစ်ခုစမ်းပြီး ပြောလို့ရတဲ့ စကားလုံးတစ်ခုရှိပါတယ် - Insane ပါ။ 10 Lux အောက်လို့ ယူဆရတဲ့အချိန်ကြမှ 20 Megapixels Image တွေနဲ့ ရိုက်တယ် - နောက်ပြီးထွက်လာတဲ့ပုံတွေကလည်း ဖုန်းနဲ့ ကြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့ အဆင်ပြေပေမယ့် ကွန်ပျူတာနဲ့ ကြည့်လိုက်ရင်တော်တော်ဆိုးပါတယ်။
အဲ့ဒီ Low Light Lens ရိုက်တဲ့ပုံကလည်း ဆန်းပါတယ် - သေချာသတိထားကြည့်ရင် အရမ်းမှောင်တဲ့အချိန်တွေမှာ Low Light Lens ကိုပြောင်းပြီး ရိုက်နေပြီဆိုရင် Live View Screen က ပိုလင်းပြီး ဝါးသွားပါတယ် - အဲ့ဒါက Pixel ၄ ခုကို ၁ ခုထဲပေါင်းပြီး5MP Image အနေနဲ့ Live View ပြနေလို့ပါ။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ဓါတ်ပုံရိုက်လိုက်ပြီး Gallery ကို အမြန်သွားကြည့်ရင် နည်းနည်းဝါးနေတဲ့ 5MP Image ကို 20MP ဖြစ်အောင် Upscale ပြန်တင်နေတာကိုပါ မြင်ရပါတယ်။ Upscale တင်ပြီးရင်တော့ ပုံက ဖုန်းထဲမှာ Zoom မဆွဲကြည့်ရင်တော့ ကောင်းတယ်လို့ ပြောလို့ရတဲ့ Low Light ပုံတွေရပါတယ်။ တကယ်လို့ အဲ့ဒီနေရာမှာ Primary Lens နဲ့ Low Light Lens ကို ပြောင်းချင်ရင် Exposure ကစားရုံ၊ အရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ်ရုံနဲ့ ပြောင်းလို့ရပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ အနောက်မှာလည်း ပြောသွားမှာပေမယ့် ပြောသင့်တဲ့အရာတစ်ခုရှိပါတယ်။ အခု OnePlus 5T က သုံးနေတဲ့ ၂ ပတ်ကျော် ၃ ပတ်လောက်ရောက်တဲ့အထိ Oxygen OS 4.7.4 ပဲရှိသေးတာပါ။ Maybe, OnePlus က 5T ကို Oreo အတွက် အချိန်ယူနေတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ် - ဒါပေမယ့် ဒီအချိန်မှာတော့ 5T ရဲ့ Low Light Lens က Unfinished Product တစ်ခုလိုဖြစ်နေပါတယ်။
ဒါက OnePlus 5T ရဲ့ Secondary Low Light Lens ပါ - အမှန်အတိုင်းပြောရရင် Low Light Lens ကထွက်လာတဲ့ ရလဒ်တွေကို သဘောမတွေ့ခဲပါဘူး။ တစ်ခါတလေ အပျော်အနေနဲ့ လုံးဝမှောင်နေတဲ့အခန်းကို ရိုက်ပြီး ထွက်လာတဲ့ပုံက ကိုယ့်မျက်လုံးက မြင်ရတာထက်တောင်ပိုနေပေမယ့် တစ်မျိုးပါပဲ။ ကျွန်တေ်ာတို့ အမြင်ကတော့ OnePlus က Low Light Lens ကို ဖြုတ်လိုက်ပြီး Software Optimizations ဘက် ပိုအလေးပေးရင်တောင် OnePlus5ထက် ပိုကောင်း၊ ပိုသဘာဝကျတဲ့ Low light ပုံတွေရိုက်လို့ရမှာပါ။
ဒါပေမယ့် OnePlus မှာ Secondary Lens ကို ဖြုတ်လို့မရတဲ့ အကြောင်းပြချက်တစ်ခုရှိနေပြီးတော့ အဲ့ဒါက ကျွန်တော်တို့ကိုတောင် အခုနက မုန်းနေမိတဲ့ Secondary Lens ကို သဘောကျသွားစေတဲ့အချက်ပါ။ Yes, it is Portrait.
Telephoto Lens မသုံးတော့တဲ့အတွက် OnePlus 5T ရဲ့ Portrait ပုံတွေက Crop မဖြစ်တော့ပါဘူး။ အလားတူဆိုလို့ Google Pixel2၊ Huawei Mate 10 Pro ၊ Meizu M6 Note ၊ Huawei Nova 2i ၊ Asus Zenfone4တွေပဲ Crop မဖြစ်ပဲ Portrait ရိုက်နိုင်သေးတာပါ။
Tele Lens မသုံးတာက Portrait ပုံတွေကို Low Light မှာပါ ရိုက်လို့ရလာတယ်ဆိုပေမယ့် Software ပိုင်းအများကြီးပိုလိုအပ်သွားပါတယ်။ Google ရော၊ Huawei ရော ဒီအတွက်ကို AI နည်းပညာတွေပါ ထည့်ထားတာကို သတိရပါ။ AI မပါတဲ့ Meizu ၊ Huawei နဲ့ Asus Zenfone4တွေက Aperture ကို Software နဲ့f0.8 လောက်ထိ ချပြီးရိုက်တဲ့အတွက် Portrait ပုံတွေမကောင်းပါဘူး - Software Update နဲ့လည်း ဒါက Fix မလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အရာပါ။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုရင် ပြင်ဖို့က ရိုက်တဲ့ပုံစံတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲမှရမှာပါ။
အဲ့ဒီအတွက် OnePlus 5T ရဲ့ Portrait ကိုလည်း Crop မဖြစ်သွားတာ၊ Low Light Portrait ရိုက်လို့ရတာကလွဲရင် သိပ်ပြီးမမျှော်လင့်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အဓိကကျတဲ့ Subject ကို Background ကနေ ခွဲထုတ်တဲ့နေရာမှာ အံ့သြဖို့ကောင်းလောက်အောင် တိကျပါတယ် - အထူးသဖြင့် လူမဟုတ်တဲ့ အရာဝတ္ထုတွေကို Tele Lens နဲ့ Portrait ရိုက်တာထက် ပိုကောင်းအောင်ရိုက်လို့ရပါတယ်။ ဒါက အခုနက Crop မဖြစ်သွားတာနဲ့ ညနေ နေဝင်တဲ့အချိန်တွေမှာပါ လမ်းမီးရောင်နဲ့ Portrait ပုံတွေရိုက်လို့ရတော့ အားသာချက်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တစ်ခုစိတ်ထင့်တာက OnePlus 5T ရဲ့ Bokeh Effect က OnePlus5မှာလိုမျိုး မလှပါဘူး။ ဒီလောက်က အရင် OnePlus5တုန်းက စစခြင်းဖြစ်ဖူးပြီးတော့ နောက်ပိုင်း Software Update ကနေ Fix လုပ်ပေးပြီး ပြင်ဆင်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရမှာပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် AI အကူအညီမပါပဲ Tele Lens မလိုပဲ Software ကနေ Subject နဲ့ Background ကို တိတိကျကျ Blur လုပ်နိုင်တာကတော့ တော်တော်လေးကို ကောင်းပါတယ်။
နောက်ပြီး လက်သင့်ခံရမယ့်အချက်က Tele Lens မရှိတော့တဲ့အတွက် 2× Optical Zoom မရတော့တာပါ။ Maybe Deal Breaker လို့ပြောဖို့ခက်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ရှေ့ကမုန့်ကို Tele Lens နဲ့ အနီးကပ်ကောင်းကောင်း ရိုက်လို့မရတော့တာကတော့ OnePlus5သုံးနေပြီး 5T ပြောင်းတဲ့အချိန်မှာ သိသာတဲ့တစ်ချက်ပါ။
ကဲ...ကင်မရာပိုင်း ကျန်တာတွေက ISO 3200, Shutter Speed 30s, Leveler, Histogram, RAW, Custom Preset တွေအကုန်လုပ်လို့ ရတဲ့ Pro Mode, OnePlus5နဲ့ ထပ်တူညီတဲ့ တော်တော်လေးကို Stable ဖြစ်တဲ့ Video Recording တွေပါတယ်။ သဘောကျမိတာက အခုပြောင်းလိုက်တဲ့ Camera Interface က One Hand usage အတွက် အဆင်ပိုပြေသွားတယ် - အားသာချက်တော့မဟုတ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် OnePlus3ကနေ 5T အထိ ဒီ Interface ပဲဖြစ်သွားပြီဆိုတော့။ :3
အဲ့တော့ကာ OnePlus 5T ရဲ့ Low Light Lens က Software ပိုင်း မလိုက်နိုင်လို့ Hardware နည်းနဲ့ အစားထိုးလိုက်တာ၊ ဒါမှမဟုတ် Oppo က R11s ကို ဒီပုံအတိုင်းလုပ်လို့ Hardware တူတူယူထားတဲ့ OnePlus 5T က ဒီအတိုင်းဖြစ်လာတာလို့ပဲ ပြောရမှာပါ။ Google Pixel 2, iPhone 8 နဲ့ Galaxy S8 ဖုန်းတွေက OnePlus 5T လောက်တော့ ဘယ်သူမှ ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့စိတ်မကူးလောက်တဲ့အမှောင်မှာ ပိုမလင်းပေမယ့် သာမန် ဓါတ်ပုံရိုက်လောက်တဲ့ Low Light အခြေအနေတွေမှာတော့ ပိုကောင်းနေတုန်းပါ။
ခက်တာက Low Light Lens က အသုံးမဝင်ပေမယ့် Portrait တွေမှာ တော်တော်လေးကို အလားအလာရှိတဲ့ပုံတွေကို တွေ့လာရပါတယ်။ မနေ့က OnePlus5အတွက် Oreo Update ရလို့ 5T များရပြီး Camera ပိုင်း Update ဖြစ်လာမလားလို့ စောင့်ခဲ့ပေမယ့် အခုအချိန်အထိတော့ OnePlus 5T Camera က Primary Sensor နဲ့ ရိုက်တဲ့ပုံတွေအဆင်ပြေပေမယ့် Secondary Lens သုံးရတဲ့နေရာတွေမှာတော့ Software ပိုင်း Update လုပ်ဖို့ လိုသေးတယ်လို့ ပြောတာအမှန်ဆုံးပါ။
Selfie Camera ကျန်ခဲ့ပါတယ် - သာမန်ပါပဲ။ OnePlus ဖုန်းဆိုတော့လည်း။
Tech Gadget's Rating :4Out of5Stars (Can't Give lower than this for better portraits and still the same primary sensor)
OnePlus 5T ရဲ့ ကင်မရာက လုံးဝ Mixed Bag တစ်ခုပါ - တိုးတက်လာတာလို့ ပြောလို့မရသလို ညံ့ဖျင်းသွားတာလည်းမဟုတ်ပြန်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျိန်းသေပေါက် မြင်တာနဲ့ အဆင့်မြှင့်တင်ထားတယ်လို့ ပြောလို့ရတဲ့အချက်တစ်ခုရှိပါတယ်။ Display ပါ။
Display ကို အခုခေတ်စားလာတဲ့ 18:9 Ratio 6.01" Display ပြောင်းတပ်ထားတယ်။ Samsung ရဲ့ Display Panel ပါပဲ။ Optic AMOLED Display က Full HD+ Resolution ပဲဆိုတော့ လက်ရှိဈေးကွက်ထဲက Oppo F5, Huawei Nova 2i, Redmi5Plus ဖုန်းတွေလိုပါပဲ။ But NO!
ကျွန်တော်တို့ ပြောတာလွန်ကောင်းလွန်မယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါက Tech Gadget ရဲ့ အမြင်ပါ။ အခု OnePlus 5T မှာ သုံးထားတဲ့ Display Quality က Apple iPhone X နဲ့ Samsung Galaxy Note 8 ပြီးရင် တတိယနေရာပေးရမယ့် Display Quality ပါ။ Full HD+ Resolution ဆိုတာက Quad HD+ Display ဖုန်းတစ်ခုနဲ့ ဘေးချင်းယှဉ်ပြီး စာလုံးတွေကို ယှဉ်ကြည့်တာကလွဲပြီး သိနိုင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်သလောက်ပါ။
ဘာလို့ ဒီလောက်ကောင်းတယ်ပြောလဲ... OnePlus 5T ရဲ့ OLED Display က OnePlus5လိုပဲ Max Brightness က 400 Nits ဝန်းကျင်ပါ။ ဒါပေမယ့် ယှဉ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာ 5T က ပိုလင်းသလိုဖြစ်နေတယ်၊ Brightness က 400 Nits ဆိုတာကို လိမ်ထားတယ်လို့ ထင်ရလောက်အောင် Max Brightness ကတော်တော်လင်းပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက နေရောင်အောက်မှာ ဘယ်လိုသုံးသုံး OnePlus 5T က ကြည့်ရတာ တော်တေ်ာကို သဘောကျမိလောက်အောင် အဆင်ပြေတဲ့ဖုန်းထဲပါပါတယ်။ Yes, only iPhone X can beat this in sunlight.
Display ရဲ့ အနားသတ်တွေကို မသိမသာလေးကွေးထားတယ် - ဘာကြောင့်လဲတော့မသိ။ Display ပိုင်းကို အားနည်းချက်ရှာလို့မရပါဘူး - ဒီဈေးမှာ ဒီ Display က အကောင်းဆုံးထဲပါ ပါတယ်။
အဲ့တော့ Display ကတော့ Full HD+ Resolution ပဲဖြစ်နေပေမယ့် အမှတ်ပြည့်ပေးရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် 18:9 Ratio ဖုန်းတွေရဲ့ ပြဿနာဖြစ်တဲ့ Video တွေ Crop ဖြစ်တာ၊ တခါတလေ ဘေးဘောင်တွေက 16:9 နဲ့ပဲ ပြနေလို့ အမည်းဘောင်တွေဖြစ်နေတာက ကြုံနေရဦးမှာပါ။ တစ်ခုကောင်းတာက OnePlus 5T မှာ App ကို Crop လုပ်ပြီး Full Screen အပြည့်ပေါ်အောင် Manual လုပ်လို့ရတာကတော့ မဆိုးတဲ့အချက်တစ်ခုလို့ပြောရမှာပါ။
Tech Gadget's Rating :5out of5Stars (Just Full HD+ Butalot better)
Performance ပိုင်းကတော့ ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ ဝယ်ဖြစ်တာက RAM 8GB ၊ Storage 128GB Version ပါ။ OnePlus5တုန်းက စမ်းသလိုပဲ ဘယ်လောက် Application တွေသုံးသုံး Hang အောင် လုပ်လို့မရ၊ 18:9 Display က Split Screen သုံးလို့ ပိုကောင်းလာတော့ ပိုတောင်သုံးဖြစ်ပါသေးတယ်။
ဂိမ်းဘက်အရင်ပြောတာပေါ့ - Display က ပိုကောင်းလာတယ်လို့ ခံစားရပြီး 18:9 နဲ့ Vain Glory, NFS : No Limits, Asphalt Extreme လို ဂိမ်းတွေဆော့ရတာ ပိုကောင်းပါတယ်။ Max Graphics နဲ့ပဲ ဂိမ်းအကုန်လုံး Run နေလိမ့်မယ်။ Marvel Future Fight ရောအခြား ဘယ်ဂိမ်းမှတော့အခုထိ Hang တာမကြုံသေးပါဘူး။
Heat ကတော့ တစ်မျိုးပါ။ စစခြင်း ၁ ပတ်လောက်မှာ Vain Glory ကို Mobile Data နဲ့ ဆော့ရင် Heat နည်းနည်းတက်ပါတယ်။ Over Heat ဖြစ်တာမဟုတ်ပေမယ့် ဘယ်လိုပြောရမလဲ.. OnePlus5တုန်းက မတက်ခဲ့ပဲနဲ့ 5T က ပိုပြီး Heat ရှိနေသလိုပါ။ ဒါပေမယ့် အခုတော့ Heat က ၁ နာရီကျော်လောက် Brightness အမြင့်နဲ့ Mobile Data နဲ့ဆော့တော့မှာ heat က မဆိုစလောက်ရှိပါတယ်။
Performance ကတော့ အခုလက်ရှိမှာ OnePlus 5T က အကောင်းဆုံးဖုန်းပါ။ ဒါပေမယ့် Qualcomm Snapdragon 845 Devices တွေမရောက်ခင်အထိပါပဲ။
Tech Gadget's Rating :5Out of5Stars. (Until SD 845 Arrives)
ဒီအထိတော့ OnePlus 5T ဖုန်းက Overall ကောင်းတဲ့လို့ပြောလို့ရနေတုန်းပါ။ ဒါပေမယ့် အဓိကအချက်တွေပြီးသွားပေမယ့် ကျန်တဲ့အချက်တွေကရော?
Battery က OnePlus5တုန်းကလိုပဲ 3300mAh Battery ပါတယ်။ Screensize ပိုကြီးတဲ့အတွက် Battery ပိုကုန်မယ်လို့ ထင်မိစရာရှိပေမယ့် OnePlus5တုန်းကလိုပဲ 3300mAh Battery တစ်ခုအနေနဲ့အထင်ကြီးစရာပါ။
သာမန် Mobile Data နဲ့ Wi-Fi အမြဲဖွင့်ထားပြီး Auto Brightness လောက်မှာ သုံးတဲ့ Normal Usage တွေမှာ Screen On Time က ၅ နာရီခွဲကနေ ၆ နာရီခွဲကြားရတယ်။
Heavy Load တွေ Wi-Fi မပါတော့ပဲ Mobile Data ပဲအမြဲဖွင့်ပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်နေတာ၊ ဂိမ်းဆော့များရင်တော့ Screen On Time က ၄ နာရီကျော်ကို ကျသွားပါတယ်။
ညဘက် Wi-Fi နဲ့ ပုံမှန် Facebook နဲ့ Instagram တစ်ညလုံးထိုင်ကြည့်တာကတော့ Screen On Time ၈ နာရီလောက်ထိရတယ်ဆိုတော့ Battery Life ကောင်းတယ်က အမှန်ဆုံးပါ။
Game သီးသန့်ဆိုရင် Vain Glory, Mobile Data, 60% Brightness မှာ တစ်ပွဲ မိနစ်၂၀ကျော်ကို 8% လောက်ပဲ လျော့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် OnePlus ဖုန်းတွေမှာ Battery က Dash Charger ရှိနေရင် စိတ်ပူဖို့ သိပ်မလိုတဲ့အရာပါ -0- 100% က မိနစ် ၇၀ မကျော်ပါဘူး။ နာရီဝက်ကို 0% ကနေ 70% လောက်အထိ အားပြန်ပြည့်တာက ပုံမှန်တစ်ညလုံးအားသွင်းတတ်ရင်တောင် အဲ့ဒီအကျင့်ကို ဖျောက်ပြီး ရုံးသွားခါနီး ခဏလောက်ပဲ တပ်ဖြစ်နေတော့မှာပါ။
ဒီနေရာမှာ Head Phone Quality ကို အရင်ပြောပါမယ်။ Maybe ဒါက တစ်ခုထဲသော OnePlus5ကနေ အောက်ဆင်းသွားတဲ့အရာဖြစ်မှာပါ။ OnePlus5ကထွက်တဲ့ Audio Experience ကို သဘောကျပေမယ့် 5T မှာ OnePlus5လိုပဲ အသံအားပြင်းပြင်းကိုထိန်းထားတယ်ဆိုတာကလွဲရင် အသေးစိတ် Details လေးတွေ နည်းနည်းလျော့သွားပါတယ်။
နောက် Speaker Quality - ဒါကတော့ ပိုကောင်းလာတဲ့အချက်ပါ။ OnePlus5နဲ့ ယှဉ်ရင်တောင် OnePlus 5T ရဲ့ Speakers က ပိုကျယ်လာတဲ့အပြင် Bass သံပိုပါလာပါတယ်။ Single Firing Speaker တွေထဲမှာ အကောင်းဆုံးလို့ပြောလို့ရပေမယ့် iPhone X နဲ့ Google Pixel2ရဲ့ Stereo Speakers တွေကိုတော့ မှီဖို့မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူး။
OnePlus5တုန်းက Oxygen OS ဟာ ကျွန်တော်တို့ Review လုပ်နေတုန်းမှာတင် Update ၅ ခုလောက်ထွက်ခဲ့ပြီးတော့ Review ရေးတဲ့အချိန်မှာ Software ပိုင်း ဘာ Error မှမရှိတော့သလောက်ပါ။
ဒါပေမယ့် OnePlus 5T ကတော့ အခုအထိ Software Update မရှိသေးပါဘူး။ အဲ့ဒီအတွက် တစ်ခါတလေ Software ပိုင်းမှာလည်း အခုထက်ပိုကောင်းသင့်တယ်ဆိုတာတွေကို တွေ့နေရပါသေးတယ်။
အဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲဆိုရင် အရင်ဆုံး 18:9 Display ဆိုတဲ့သဘောက ကျွန်တော်တို့ကို Video တွေ ပိုကြည့်၊ ဂိမ်းပိုကစားစေချင်တဲ့ သဘောပါ။ အဲ့ဒီအချိန် Landscape အနေအထားမှာ Noti Bar ဆွဲချရင် ဘာလို့ အလယ်ကပဲ ကျလာရတာလဲ? အရင် OnePlus5မှာတုန်းက ဘယ်ဘက်ကဆွဲရင် ဘယ်ဘက်၊ ညာဘက်ကဆွဲရင် ညာဘက်နဲ့ အလယ်ကဆွဲချမှ အလယ်က Noti Bar ကျတာပါ။ နောက် Update မှာတော့ ဒါက ပြန် Fix လုပ်သင့်ပြီး လောလောဆယ်မှာတော့ စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်စရာကိစ္စတစ်ခုပါ။
ဒါပေမယ့် OnePlus ရဲ့ Ambient Display Style အသစ်ကတော့ တော်တော်လေးကို မိုက်ပါတယ်။ အခုနကပြောခဲ့သလို 18:9 Ratio နဲ့ အဆင်မပြေသေးတဲ့ App တွေကို Force 18:9 လုပ်လို့ရတယ်၊ Dual Apps ပါတယ်၊ Oxygen OS ကတော့ ကျန်တဲ့အရာတွေ အကုန်လုံး သုံးရတာမြန်တယ်၊ ရိုးရှင်းတယ်၊ အပိုတွေမပါပါဘူး။
#Face Unlock & Fingerprint
OnePlus 5T ရဲ့ Face Unlock က ကျွန်တော်တို့ ဖုန်းသုံးတဲ့ပုံစံကို ပြောင်းစေခဲ့ပါတယ်။ Unlock Speed က Lock Screen ကို 80% လောက်မြင်ရမဟုတ်ပဲ Home Screen ပဲတန်းရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ Face ID လောက် မလုံခြုံပေမယ့် လောလောဆယ် OnePlus 5T, OnePlus 5, iPhone X, Mi Notebook Pro, iPad Pro, iMac နဲ့ Asus IPS Display တွေမှာတော့ ဓါတ်ပုံတင်ပြီးစမ်းတာမရ၊ Video လည်း မရ၊ ယုတ်စွ ဓါတ်ပုံ Print ထုတ်ပြီး စမ်းပေမယ့်လည်း မကျော်နိုင်သေးပါဘူး။
အဲ့တော့ကာ OnePlus 5T Face Unlock က မလုံခြုံပေမယ့် မြန်တယ်၊ အရမ်းကိုမြန်တယ်။ လုံးဝမှောင်တဲ့နေရာမှာအလုပ်မလုပ်ပေမယ့် အမြဲတမ်းလိုလိုမှာ ကိုယ့်လက်ညိုးက Fingerprint နေရာမှာရှိနေတော့ အခြားဖုန်းတွေနဲ့ ယှဉ်ရင် Unlock လုပ်တာကတော့ အရမ်းမြန်နေမှာပါ။
Face Unlock ကို App Lock တွေမှာ ထားလို့မရတာက ပိုပြီး စိတ်ချလို့ရတယ်၊ ဒါပေမယ့် စားပွဲပေါ်မှာတင်ထားရင်တော့ ဖုန်းကို ယူပြီး Fingerprint နဲ့ ဖွင့်ရင်ဖွင့်၊ မဟုတ်ရင် Password ရိုက်ရတော့မှာပါ။ အဲ့တော့ PIN ပဲ ထားကြပါ :3
So, there you are. OnePlus 5T.
OnePlus5တုန်းက ကျွန်တော်တို့ Recommend ပေးခဲ့ပါတယ်။ အခုလည်း OnePlus 5T ကို OnePlus5ကနေ ပြောင်းကိုင်ခဲ့ပေမယ့် နောင်တမရခဲ့ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲ?
OnePlus 5T နဲ့ OnePlus5ကို ယှဉ်သုံးတဲ့အခါမှာ 5T က5တုန်းက အားနည်းချက်လို့ ပြောလို့ရတာအကုန်လုံးကို Improve လုပ်ခဲ့တယ်လို့ ပြောရမှာပါ။ ဒါကလည်း အသေးစိတ်တစ်ခုချင်းစီမှာပါ။ Buttons တွေပိုနှိပ်လို့ကောင်းသွားတယ်၊ Flash Light က အခုပိုလင်းလာတယ်၊ Display ပိုကောင်းတယ်၊ Camera က Tele Lens မပါတော့ပဲ Low Light က5ထက်တော့ပိုကောင်းနေသေးတယ်၊5ထက်လည်း Portrait ပိုကောင်းတယ်၊ Speaker ကအစ ယှဉ်ကြည့်ရင် ပိုကောင်းနေတယ်။
အဲ့လိုမျိုး ပိုကောင်းနေပြီးတော့ ဈေးကလည်း အခု ၆ သိန်းခွနဲ့ ၇ သိန်းခွဲဆိုတော့ OnePlus5တုန်းကနဲ့ တူတူလောက်ပဲ။
အဲ့တော့ အခု OnePlus 5T ကို Recommend မပေးပဲနေဖို့က ခက်သွားပါပြီ။ OnePlus 5T က All Rounder High End ဖုန်းတစ်ခုပါ - သူ့မှာ ဘယ်နေရာကပဲကြည့်ကြည့် ဈေးနဲ့မတန်ဘူး၊ တစ်နေရာရာက ခေတ်နောက်ကျနေပြီ၊ Quality မကောင်းဘူးဆိုပြီး ပြောလို့မရတဲ့ဖုန်းပါ။
OnePlus 5T ကိုဝယ်ပြီး နောင်တရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် 64GB နဲ့လောက်တယ်ဆိုရင် ၆ သိန်းခွဲနဲ့ ဒီလို OnePlus 5T လိုဖုန်းတစ်ခုက အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုပါ။
ဒါပေမယ့်... ဒါပေမယ့် 128GB ကို ၇ သိန်းခွဲ၊ ၈ သိန်းလောက်ပေးပြီး ဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ စဉ်းစားရမှာက OnePlus 5T က Pixel 2, Galaxy Note 8, Huawei Mate 10 Pro တွေလိုမျိုး ကင်မရာပိုင်း၊ S Pen, Water Resistant လို ဈေးကွာဟချက်နဲ့ တန်တဲ့ Features တွေပါဝင်မှာမဟုတ်တာကို ထည့်စဉ်းစားပါ။ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင်လည်း OnePlus5ကနေ 5T ကို ပြောင်းတာကို နောင်တမရခဲ့ပေမယ့် Google Pixel2လိုဖုန်းကို နောက်ထပ် ၃ သိန်းလောက် ထပ်လိုက်ရင် ဝယ်လို့ရနေပြီဆိုတာက တစ်ခါတလေ စိတ်တွေဝေစရာပါ။ အထူးသဖြင့် Rangoon Rev နဲ့ ကင်မရာပိုင်း ယှဉ်ကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပါ။
ဒါပေမယ့် ၃ သိန်းလောက်ကလည်း ကိုယ့်အတွက် အရေးပါတယ်၊ အဲ့ဒီ Premium Features တွေကလည်း ကိုယ့်အတွက် မရှိလည်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ OnePlus 5T က ဝယ်သင့်တဲ့ဖုန်းပါ။ You won't regret.
P.S : ကျွန်တော်တို့ အားနည်းချက်ပြောတာကျန်ခဲ့ပါတယ်။ ပြောမယ်ဆိုရင်လည်း Zawgyi Font မရတာ၊ Root လုပ်ရမှာ၊ OnePlus Brand ကို သိတဲ့သူရှားတာတွေပဲဆိုတော့ အခုအချိန်မှာ အဲ့ဒီအချက်တွေကို အားနည်းချက်လို့ ပြောဖို့မလိုအပ်တော့ဘူးပဲယူဆပါတယ်။
Sorry for late. Thanks for reading.
Posted by Alex Aung at 5:21 AM